Ny fanadihadiana fohy dia manambara lakilasy tsy ampoizina ho an'ny personalization 6 Martech Zone
Ireo mpivarotra dia mampifandray ireo zavatra niainan'izy ireo manokana tamin'ny doka lasibatra tsara raha toa kosa ny mpanjifa mampifandray ny traikefan'ny mpanjifany (CX) miaraka amin'ny fanohanana sy ny fividianana. Raha ny marina, ny 45% -n'ny mpanjifa dia manome laharam-pahamehana ny fananana traikefa manokana ho an'ny fifanohanana fanampiana noho ireo izay mifandraika amin'ny fizotrany manokana amin'ny marketing na amin'ny fividianana.
Ny elanelana dia fantatra sy voarakitra an-tsoratra amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena vaovao avy amin'ny InMoment, Ny herin'ny fihetsem-po sy ny personalization: Ahoana no ahafantaran'ny marika sy hahitana ny andrasan'ny mpanjifa. Isaky ny firenena nanaovana fanadihadiana dia tsy nifanaraka ny marika sy ny mpanjifa rehefa nanontaniana momba ny personalization. Ny valim-pikarohana dia manondro ny olana sy ny fotoana mety amin'ny resaka personalization.
Na dia misy aza ny miovaova araky ny firenena, ny mpanjifa manerantany dia mitovy lavitra noho ny mahasamihafa azy. Tian'izy ireo ny hitazona ny fampanantenany ireo marika ary hiezaka ny hampiavaka azy ireo ny fanohanany atolony mandritra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo. James Bolle, VP, Head of Client Services, EMEA ao amin'ny InMoment
Ity dia manondro olana iray izay tsy hihiaka mafy loatra isika - ny marketing dia miankina amin'ny fanantenana amin'ny vokatra sy ny sampana serivisy ho an'ny mpanjifa manome fanohanana miavaka. Raha misy tsy ampy na iray aza, eto amin'ity tontolon'ny fiaraha-monina ity dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny ezaka ataonao amin'ny varotra ankapobeny.
Ny valiny ho an'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa ny fampiasana ny personalization dia manondro fanalahidy mazava ho an'ny fahombiazana, saingy vitsivitsy hafa no tsy ampoizina amin'ny fikambanana maro. Maniry ny mpanjifa:
Fanandramana manokana - Raha hanangona vaovao ianao dia manantena ny mpanjifa fa hampiasa izany angona izany ianao raha te hahafantatra manokana ny fandefasana hafatra sy ny fampiroboroboana mifanaraka amin'izany.
Transparency - Ny marika dia tokony hampahafantatra ny mpanjifa ny fomba fampiasana ny heviny hanatsarana na hanovana ny vokatra na serivisy.
Fihetseham-po miasa Trumps - Ny fanavahana ny marika dia ho vokatry ny fifandraisana sy ny zavatra iainan'ny mpanjifa kokoa noho ny endri-javatra na ny fisafidianana.
Fanadihadiana fohy kokoa, fihainoana bebe kokoa - Fanadihadiana fohy momba ny fanehoan-kevitra miaraka amin'ny sehatra fanehoan-kevitra mamela ny mpanjifa hizara tantara amin'ny teniny manokana. Fampitomboana ny fampiasana ny fanaraha-maso sy ny fanangonana ny angona sosialy, feo ary fantsona finday.
Mobile Voalohany - Fiantohana ny fanohanana finday 24/7 hiatrehana ny fahazaran-tsain'ny mpanjifa mitombo.
Hevitra azo antoka kokoa amin'ny Internet - Ny marika manampy ny mpanjifa hahita ny mombamomba ny namana tsara kokoa momba ny fividianana fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fanamarihana anaty Internet voamarina.
Ny fandinihana dia nahitana valinteny avy amin'ny mpanjifa 20,000 10,000 sy marika 12 avy amin'ny firenena XNUMX, anisan'izany i Aostralia, Kanada, Danemark, Failandy, Frantsa, Alemana, Nouvelle Zélande, Norvezy, Espana, Suède, Fanjakana Mitambatra ary Etazonia. Ny tatitra dia manara-maso fanontaniana enina amin'ny benchmark ary ho fanampin'izany, ary manadihady ny anjara asan'ny personalization sy ny fihetsem-po amin'ny fifandraisan'ny marika sy ny mpanjifa.
Sintomy ny tatitra feno InMoment
Momba ny InMoment
InMoment ™ dia sehatra fanatsarana ny mpanjifa miorina amin'ny rahona (CX) izay manampy ny marika hampiasa ny fahitan'ny mpanjifa sy ny mpiasa hampahafantatra ny fanapahan-kevitry ny orinasa tsara kokoa, ary hamorona fifandraisana sarobidy.
Tags: marikaandrasan'ny mpanjifafitadiavana mpanjifacxfisamborana datafihetseham-poinmomentpersonalizationtolo-kevitra momba ny vokatrapaikadin'ny fanadihadiana
Ahoana ny fomba hamehezana ny dian'ny mpanjifanao